15-ka Balamo ee ugu Wanaagsan ee lagu Qabto WordPress Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/15-ka Balamo ee ugu Fiican ee Qabsashada WordPress Plugins
15-ka Balamo ee ugu Fiican ee Qabsashada WordPress Plugins
Haddii meheraddaadu ay ku tiirsan tahay ballamaha, waxaad leedahay barta WordPress oo aadan weli rakibin plugin booking, waxaad u baahan tahay inaad taas hesho. Gaar ahaan mid ka mid ah balamahan ballansashada plugins WordPress.
Ma jirto sabab ay ganacsiyo badan u galaan weli ku qasbo macaamiishooda inay talefoonka wacaan, la xidhiidh email ahaan oo ay sugaan jawaabta, ama waxa ugu xun, jidh ahaan u soo gala xafiisyadooda si ay ballan u qabsadaan. Hirgelinta fudud-si fudud loo isticmaali karo ballanta waxay u horseedi kartaa iibka korodhka dadka shaqeeya inta badan saacadahaaga, ama aan dareemeynin inay maraan waqtiyada haynta oo ay sugaan soo-dhoweeyaha si uu u ballansado telefoon. Waxayna u horseedi kartaa ballamo badan oo la sameeyo si degdeg ah, gaar ahaan maadaama aad ku garaaci karto ikhtiyaarka ah inaad isla markiiba ballansato ka dib markii nuqulka shabakadu uu qabto (rajo) shaqadiisa.
Mahadsanid, WordPress waxa uu bixiyaa fursado badan oo lagu dhammaystirayo hawshan.
Horay ayaanu u daboolnay plugins-yada ballansashada, laakiin kaliya sida ay ula xidhiidhaan hudheellada. Maanta, waxaan daboolaynaa 15+ dheeraad ah, waxaana ballaarineynaa aragtidayada si aan ugu darno ballan qabsashada WordPress plugins ee loogu talagalay jadwalka wax kasta!
1. Qabsashada Ballanta WordPress ee MotoPress
Ka dib guushii WordPress Hotel Booking plugin, MotoPress waxa ay u dhaqaaqday abuurista matoor awood leh oo ballan u ah ganacsiyo ku salaysan ballan. Buug-qabsiga Ballan-qaadka cusub ee WordPress ayaa hadda helaya xawligiisa ilaa uu ugu dambayntii noqdo qalab kale oo boos-jabineed oo heersare ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad heli doontaa boos celin balamo adag oo leh baaxad weyn oo codsi ah iyo miisaan ganacsi kasta. Tani waxay ka dhigan tahay inaad haysatid hawlqabad kugu filan oo aad ku qanciso baahiyaha labada shirkadood ee waaweyn (dugsiyada gaarka ah, rugaha caafimaadka, jimicsiga, iwm) ama hal keli ah ( macalin shakhsi ah, physiologist, lataliyaha ganacsiga, iwm).
Ugu horreyntii, plugin-ku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dejiso boosaska gaarka ah (laga bilaabo 15 daqiiqo), iyo waqti kaydinta ka hor iyo ka dib ballanta dhabta ah. Muujinta labaad waa jadwalka ballansashada WordPress. Milkiilayaasha mareegaha waxay si ku habboon uga tafatiran karaan macluumaadkooda xagga dambe, halka isticmaalayaashu ay u arki karaan xogtaada qaab aad u fudud in la garto. Intaa waxaa dheer, jadwalka ballansashada ayaa awood u leh inuu shaaca ka qaado macluumaadka dhammaan adeegyada, dooro hal ama dhowr shaqaale, oo uu doorto goobta loo baahan yahay (tusaale haddii shirkad ku bixiso adeegyo xafiisyo/meelo badan).
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay dhisi karaan muuqaallo faahfaahsan oo ku saabsan shaqaalahooda waxayna ku dari karaan boosaska waqtiyada qadada, nasashada, iyo maalmaha fasaxa. Waxaad xitaa sheegi kartaa maalmaha toddobaadka ee shaqaale gaar ah uu ka shaqeeyo xafiis kale.
Si aad awood ugu yeelatid inaad xakamayso dhammaan ballan-qaadyada adigoon jahawareerin ama ka maqnaan faahfaahinta qaarkood, MotoPress Booska Ballanka Booqashada waxay hubisaa soo bandhigida ugu habboon ee dashboardka WP. Arag dhammaan xogta loo baahan yahay, oo la soco diiwaan gelintaada iyo xaaladdooda hal meel.
2. Nidaamka Booska Salon
Ha u oggolaan magaca ku khiyaaneeyo - Nidaamka Booska Salon waa maareeye ballan oo dhammaystiran oo horumarsan oo ku habboon ganacsiyo kala duwan. Plugin-gan qaaliga ah waxaa ku jira sifooyin lagama maarmaan ah si loogu bixiyo adeegyada addons-ka, ballamaha buugga, maamula jadwalkaaga iyo xitaa aqbal lacagaha.
Booska Salon waxay siisaa ganacsiyada hab sahlan oo loogu daro foom ballansan bogagga WordPress. Kaliya waxay qaadataa 5 daqiiqo si aad u hesho habaynta plugin laakiin waxay ku siinaysaa doorashooyin badan oo horumarsan si loo hubiyo in ballamahaaga si sax ah loo ballansan yahay. Kuwaas waxaa ka mid ah shuruuc jadwal aan xadidneyn (goob ahaan, xubin ka mid ah shaqaalaha, adeegga, kala duwanaanshaha taariikhda, iwm), isdhexgalka Google Calendar, iimaylka ama xasuusinta sms (Twilio, Plivo iyo 1p1 waa la taageeray), xogta macaamiisha u hoggaansan GDPR (oo leh taariikh shaqsiyeed, xisaab xidhid iyo qoraalo) iyo ikhtiyaarrada lagu ururiyo faallooyinka boggaaga, Facebook ama Google My Business. Waxaad xitaa ku dari kartaa ikhtiyaarada lacag bixinta foomkaaga - PayPal, Stripe, Square, Paystack, Mollie iyo Redsys albaabbada lacag bixinta waa la taageerayaa. Oo waxaa jira fursado loogu talagalay goobta tibaaxaha iyo sidoo kale codes coupon aan xadidnayn.
Xitaa waxa jira abka balamaha oo si buuxda u shaqaynaya (iOS iyo Play) oo diyaar u ah maamulayaasha iyo shaqaalaha si ay u maareeyaan boos celinta. Markaa adiga iyo kooxdaada waxaad si fudud ugu socon kartaan ballamaha soo socda. Iyo haddii mar uun aad su'aal qabto kooxda horumarintu waxay ku siinaysaa taageero weyn (oo ku qoran saddex luqadood oo kala duwan!).
Waxa kale oo jira nooc bilaash ah oo la heli karo haddii aad rabto inaad isku daydo Booska Salon. Waxay leedahay dhammaan astaamaha asaasiga ah iyo dejinta si aad u bilowdo buuxinta jadwalkaaga ballamaha. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in iyada oo nooca bilaashka ah uu bixiyo astaamo badan oo ballan ballan, waxaa muhiim ah in la ogaado in albaabbada lacag-bixinta, Salon Booking app-ka moobilka iyo 30+ pluginnada lagu daro ay diyaar u yihiin oo keliya shatiyada qaaliga ah. Markaa si aad runtii u maamusho ballamahaaga sida madaxa, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso u cusboonaysiinta ganacsi ama qorshe aan xadidnayn.
3. Kaliya Jadwal Balamo (Freemium)
Marka ay timaado jadwalka, sida ugu fiican waxaad u dooneysaa dhammaan hal xal. Wax kuu oggolaanaya inaad ku darto adeegyo, ku siiya taageero taariikho iyo waqtiyo kala duwan, oo ay ku jiraan jadwalka ballansashada, oo kuu fududeynaya inaad maamusho ballamaha ay macaamiishu ballansan yihiin. Waxaas oo dhan iyo in ka badan ayaa ah waxa ka dhigaya Ballannada Jadwalka Fudud ikhtiyaar weyn.
Kaliya Ballannada Jadwalka waxay ku siinayaan wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilawdo boos celis adoo isticmaalaya boggaaga WordPress. Qalabka lagu rakibay waxaad samayn kartaa oo ku dari kartaa noocyada ballan ee dhammaan adeegyadaada. Markaad ku darto adeeg cusub waxaad yeelan doontaa doorashooyin waqtiyo la heli karo ama waqtiyo gaar ah oo bilaw ah, maalmo, xeerar jadwal ah, iwm. Adeegga gaaban ayaa sidoo kale loo samayn doonaa si aad si dhakhso ah ugu dari karto foom ballansan boosto ama bog kasta. Si fudud Jadwalka Balamaha xitaa waxay leedahay ka hortag labanlaab ah oo ballan-qaadis ah - markaa mar haddii boos boos loogu ballansan yahay adeegga, dib uma ballansan karo adeegyada kale hoostooda.
Adeegyada lagu daray waxaad u gudbi kartaa inaad ku darto jadwalka ballansashada goobtaada. Waxaa jira fursado badan oo aad ku habeyn karto kalandarkaada oo ay ku jiraan midabada gaarka ah, xarfaha, suufka iyo isbarbardhigga (iyo caadada CSS sidoo kale waa la taageerayaa). Iyo sidoo kale ikhtiyaarada lagu daro xeerarka kalandarka, taariikhaha madowga, ogeysiisyada iimaylka caadiga ah iyo xitaa tarjumaada. Gelida kalandarkaada waa sahlan tahay iyadoo ay ugu wacan tahay koodka gaagaaban ee dareen-galka leh ee plugin iyo blocks-ka wax-dhisayaasha (loogu talagalay Gutenberg, Elementor, Laxanka Muuqda iyo in ka badan).
Marka aad bilowdo inaad aqbasho boosaska, way fududahay in la maareeyo. Maamulayaashu waxay si toos ah uga arki karaan ballamaha soo socda iyo kuwa hore ee WordPress, iyo xannibaadaha ballamaha soo socda waxaad ku dari kartaa cutubka boostada ama bog kasta si ay macaamiishu u arki karaan booskooda.
Raadinta wax badan? U cusboonaysii balamaha Jadwalka kaliya ee lagu daray, Pro ama Business. Iyada oo ku xidhan qorshaha aad dooratid waxaad heli doontaa isdhexgalka Google Calendar, meelaha gaarka ah, webhooks, lacag bixinta, iimaylka iyo SMS, falanqaynta, taageerada heerka sare ah ee horumariyaha iyo wax ka badan.
4. Ballan-qabsiga Heerka Ganacsiga Amelia
Amelia waa mid ka mid ah plugins ballan ballan ballan ee aad u dooran karto ganacsigaaga. Xalka ballan-qaadista tooska ah ayaa sii shaqaynaysa 24/7 si aadan weligaa u seegin macmiil cusub. Kaliya rakib, habbee dejimahaaga oo waxaad diyaar u tahay inaad ruxdo-n-roll!
Plugin ballan-qaadka Amelia waxa ku jira sifooyin si fudud loo isticmaali karo si aad u dhisto foomamka ballansashada ballankaaga. Ikhtiyaarada xoogga leh waxaa ka mid ah taageerada shaqaale badan (oo ay la socoto awoodda lagu daro adeegyo gaar ah, saacadaha caadiga ah iyo wakhtiga fasaxa mid kasta), lacagta maxaliga ah, adeegga dheeraadka ah, ogeysiisyada iimaylka, sawirada sawirada, coupons, oo lagu daray midabka / xarfaha hore ee dhammaadka hore. naqshadeynta.
Iyada oo foomkaagu diyaar yahay, macaamiishu waxay awoodaan inay isticmaalaan jadwalka ballamaha is-dhexgalka (bille, toddobaadle, maalinle iyo sidoo kale liiska / aragtida wakhtiga) iyo saaxir ballan-qaad tallaabo-tallaabo u gaar ah oo leh shaandhayn weji leh si ay u helaan wakhti ballan adeeg gaar ah oo leh xubin gaar ah oo shaqaale ah (ama xitaa meel sax ah). Markay tahay wakhtiga wax bixinta, macaamiisha waxay isticmaali karaan Amelia-ku-dhismay albaabada lacag bixinta si ay wakhtigooda u xafidaan ama ay u doortaan lacag bixinta goobta.
Amelia xitaa waxaa ku jira kood gaaban oo faa'iido leh si loo abuuro bogga adeegyada. Si fudud ugu dheji summada gaaban bog cusub mid kasta si aad u muujiso adeegyadaada hadda oo leh cabbirrada hal adeeg gaar ah, qayb dhan ama dhammaan qaybaha).
Wali lama iibin? Fiiri dib u eegista balamaha ballanka Amelia ee buuxa si aad u aragto dhammaan sifooyinka iyo ikhtiyaarrada ku jira ficilka!
Adigoo isticmaalaya Booknetic waxaad si fudud u dhisi kartaa balamo ka wanaagsan iyo jadwal ballan si aad u kobciso ganacsigaaga. Jadwalka balanta ee casriga ah ee jawaab celinta leh waxaa ku jira sifooyin badan oo kaa badbaadiya wakhtiga iyo lacagta iyo sidoo kale ka dhigida habka ballansashada mid aan toos ahayn macaamiisha. Laga soo bilaabo abuurista foomka ilaa habaynta lacag bixinta Booknetic ayaa wada samayn kara. Haddi aad ku shaqeyso saloon, xarun jimicsi, xafiis sharci ama ganacsi kale oo xirfad leh Booknetic waa hubaal inay buuxinayso baahiyahaaga (iyo macaamiishaada).
Marka lagu rakibo waxaad isticmaali kartaa Booknetic si aad u abuurto nidaam ballan ballan oo kuu gaar ah mareegahaaga. Laakin dhamaan waxay ka bilaabmaan qaab dhisaha Isticmaalka xulashooyinka ku dhex jira qaab-dhisaha tooska ah ee naqshadaynta guud, nidaamka midabka, tillaabooyinka ballan-qaadista, qaybaha adeegga ee heerarka badan, shaqaalaha, goobaha iyo wax ka badan waxaad abuuri kartaa foom si fiican ugu habboon ganacsigaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad abuuri kartaa adeegyo dhammaystiran oo leh waxyaabo dheeri ah iyo sidoo kale helitaanka shaqaale.
Booknetic sidoo kale waxay awood kuu siinaysaa inaad aqbasho lacag bixinta ama dhigaalka ka hor wakhtiga ballanta. U oggolow macaamiisha inay ka doortaan PayPal, Strip ama lacag bixinta goobta. Ama ka faa'iidayso WooCommerce si aad si aan kala sooc lahayn ugu dhexgeliso jadwalka ballansashadaada ikhtiyaaro lacag-bixineed oo dheeri ah. Sifooyin kale oo xusid mudan waxaa ka mid ah dashboard tafatiran oo loogu talagalay adiga iyo shaqaalahaaga, awoodda aad u dhoofin karto macaamiishaada iyo/ama ballamahaaga si ay heer sare u gaaraan (ku weyn maareynta xogta ama maareynta jadwalka shaqaalaha), iyo sidoo kale tarjumaad diyaar ah oo loo maro WPML.
Laakiin intaas kuma koobna. Macaamiishaadu waxay sidoo kale jeclaan doonaan Booknetic. Quruxda iyo casriga UX waa labadaba soo jiidasho iyo dareen leh. Macaamiishu waxay awood u leeyihiin inay ku qabsadaan qalab kasta si ay si fudud ugu shaandheeyaan shaqaalaha, adeegyada ama goobta si ay u helaan wakhti ballan ah oo buuxinaya baahidooda. Oo waxay ku xidhan tahay fursadaha aad karti u yeelatay, waxay sidoo kale ballan qabsan karaan hal mar, soo noqnoqda iyo xataa ballamaha kooxeed. Taageerada lagu dhex dhisay SMS iyo ogeysiisyada iimaylka, oo lagu daray Google Calendar 2-way sync, waxa ay la macno tahay in aanay lumin doonin waxa ay ballansadeen. Ka ilaalinta macaamiishaada mid faraxsan iyo ganacsigaaga oo kobcaya.
6. Balamaha Vik
U dhis ballamo dhammaystiran iyo nidaam jadwal u samaynta ganacsigaaga WordPress iyo Balamaha Vik. Qalabkan WordPress ee xoogga leh waxaa ka buuxa astaamo si aad u maareyso waqtigaaga mid degdeg ah oo fudud.
Midka ugu horreeya oo ah kalandarka la isku halayn karo, oo dhammaystiran boos celin online ah. Vik, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku darto adeegyada, boosaska wakhtiga, mudada, awooda dhacdada iyo xitaa helitaanka shaqaalaha (iyada oo loo marayo wakhtiga iyo goobta). Oo haddii meheraddaadu ay bixiso qiime gaar ah oo ku salaysan wakhtiga maalinta, fasaxa ama xilliga waxaad ku dari kartaa taas sidoo kale! Habkan macaamiishu waxay si fudud u qabsan karaan ballamaha, hadday tahay ballan ciddi-bixid ama la-talin cashuureed.
Balamaha Vik waxa kale oo ay fududaysaa in la maareeyo boos celinta iyo qaansheegyada macmiilka. Xitaa waxaad dejin kartaa iimaylka tooska ah iyo ogeysiisyada SMS si aad macaamiisha ugu ogeysiiso marka boos celintooda la xaqiijiyay, ama si aad ula socoto xusuusin. Oo maadaama albaabbada lacag bixinta ee badan ay taageerto Vik Ballamaha Pro way fududahay in lacag-bixinta lagu aqbalo onlayn. Ka dhigista habka ballansashada ballanta mid aan toos ahayn macaamiishaada, bilow ilaa dhammaad!
7. Balamaha WooCommerce iyo Balamaha
Si kastaba ha ahaatee ganacsigaaga, WooCommerce Bookings iyo Balamaha PluginHive waa doorasho kale oo weyn. Booska boos celinta ee dabacsan ayaa ka dhigaysa in lagu habeeyo foomamka goobtaada si aad u ballansato bil, maalin, saac ama xitaa daqiiqad. Intaa waxaa dheer, waxaad awood u siin kartaa macaamiisha inay doortaan balamo badan hal ballan - taas oo ah sifo aad u fiican haddii aad kiraysato meel dhacdo, qolal sariir iyo quraac ah, shir maalmo badan ama xaflad, iwm.
Plugin-ku wuxuu u oggolaanayaa xubno badan oo shaqaale ah iyo qiimeyn shaqsiyeed. Sidan kooxdaadu waxay ku dalaci karaan si waafaqsan khibradooda, waxaana mahada leh plugin's Dynamic Total Booking Cost xisaabinta macmiilku waxay arki karaan ikhtiyaarada sicirka marka aad boos buuxinayso. Waxa kale oo aad awood u siin kartaa wax-ku-kordhinta adeegyada dheeraadka ah ama sifooyinka aad bixin karto (sida ku-darka daawaynta udgoonka marka la qaadanayo duugis).
Booska WooCommerce Bookings iyo Balamaha sidoo kale waxaa ku jira xulashooyinka ogeysiisyada iimaylka iyo sidoo kale baajinta (haddii aad oggolaato). Iyo isku xidhka Google Calendar ee ku dhex jira, adiga iyo macaamiishaaduba way kuu fududahay inaad ku darto ballamaha cusub jadwalkaaga. Astaamaha plugin ee kale waxaa ka mid ah magaca qiimahaaga, lifaaqyada faylka, qiimaha kala duwan (sida qiimayaasha sare ee maalmaha fasaxa ah ama fasaxyada), waafaqid WPML, taageero luuqado badan, isku-dubarid caalami ah oo hantida inta u dhaxaysa jadwalka ballansashadaada iyo dukaanka, oo lagu daray ton kale. Hubi bogga ugu muhiimsan ee plugin si aad wax badan uga barato.
8. Ballanta Online ka qabso PRO
U fududee macaamiishaada inay balamo ku qabsadaan Ballan Online PRO. Plugin Tani waxay u ogolaanaysaa isticmaalayaasha si ay u ballansadaan sida uu xubin kooxeed (ama ay hore u boodi karaan iyada oo aan doorbidayn) ama adeeg, ka dibna dooran taariikhda iyo wakhtiga. Iyo sababta oo ah jadwalka jadwalka iyo xulashooyinka plugin-ka ayaa ka jawaabaya - boos-u-qabsigu waa dhakhso iyo fududahay aalad kasta. Booqo buuga balanta khadka tooska ah ee PRO si aad naftaada u aragto!
Ka sokow u fududaynta macaamiisha, Ballan Online PRO sidoo kale waa dabaylo lagu dejiyo boggaaga WordPress. Kaliya adeegso astaamaha bilawga degdega ah ee plugin si aad ugu darto kooxdaada iyo wax bixinta Ku dar xubno badan oo shaqaale intaad rabto, ka dooro 2 jadwal shaqo oo kala duwan (saacadaha ama saacadaha), habaynta wakhtiga ballansashada, ku dar jeegaga PayPal iyo in ka badan. Intaa waxaa dheer, waxaad awood u siin kartaa xasuusinta SMS - si macaamiishaadu aysan waligood ka maqnaan ballan mar dambe! Ikhtiyaarada kale ee plugin waxaa ka mid ah boosaska shaqada, sawiro, maalmaha fasaxa, qaybaha adeegga, iyo la dhexgalka WPML, Twilio, PayPal, SMSC iyo Firebase.
9. Ballan-qabsiga iyo Jadwalka intarneedka (Bilaash)
Booska Ballanka & Jadwalka Khadka Tooska ah ee vCita waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu daro foomka ballanta boggaga WordPress. Plugin-ku wuxuu ku fiican yahay ballansashada dhacdooyinka, xiisadaha, hal adeeg iyo wax ka badan.
Plugin-ka vCita wuxuu bixiyaa jadwal online ah oo kala dooranaya sida ballamaha adeegga ee xubin shaqaale gaar ah, xaqiijinta ballan-qaadka, iyo taageerada lacag-bixinta. Laakin waxa runtii kala sooca vCita waa fariimaha ku dhex dhisan iyo shaqaynta dib u yeedhista. Plugin-ku waxa uu la shaqeeyaa vCita Mobile App-ka si uu isla markaaba kuu ogeysiiyo codsiyada cusub ee ballansashada ama laguugu soo diro xusuusin ballan. Intaa waxaa dheer waxay kuu ogolaaneysaa inaad u dirto fariimaha iyo faylasha macmiilkaaga ka hor intaadan la kulmin. Ku oggolaanshaha inaad la xiriirto macaamiisha oo aad samaysato xiriir.
Laakiin intaas oo dhan ma aha cVita waxay u qaban kartaa ganacsigaaga. Sifooyin badan, u cusboonaysii qorshaha khidmadaha Maareynta Ganacsiga vCita. Iyada oo ku xidhan qorshaha aad dooratay, tani waxay furi kartaa sifooyinka falanqaynta, kuuboonnada, qoraalka macmiilka, suuq-geynta iimaylka, oggolaanshaha shaqaalaha, iyo xitaa taageerada mudnaanta leh. Qorshayaashu waxay ka bilaabmaan $15/bishii jadwalka aasaasiga ah ee khadka, ama $29/mo ee Waxyaabaha Aasaasiga ah – Xariir macmiil oo la gaaryeelay, Jadwal ganacsi oo khadka ah oo lagu daray taageerada biilasha iyo qaansheeg bixinta. In kasta oo aad ka faa'iidaysato qalabka maaraynta ganacsiga oo dhan, waxaad u baahan doontaa qorshe Platinum. Laakiin tixgelinta in vCita ay la mid tahay adeegyo ganacsi oo kala duwan oo mid ah, waa maalgashi macquul ah oo ka badan.
10. Buug-buureed iyo jadwal u samaynta Ballanta
Haddii aad fiirineysay ballan aad u xoog badan oo buuxinta plugins-yada WordPress ka dib waxaa laga yaabaa inaad horay ula kulantay Bookly. Buug-qabsigan caanka ah ee khadka tooska ah ayaa la habeeyay si uu kaaga caawiyo inaad qabsato ballamo badan iyadoon loo eegin goorta ama sida macaamiishaadu u galaan goobtaada.
Bookly waa mobil iyo tarjumaad diyaar ah, markaa foomamkaagu waxay si fiican ugu muuqdaan luqad kasta qalab kasta. Waxaa dheer, taageerada ku dhisan iimaylka iyo ogeysiisyada SMS iyo is dhexgalka Google Calendar waxay xaqiijisaa macaamiishaada inaysan waligood seegin ballan. Ma doonaysaa inaad lacag ku dalacdo wakhtiga ballansashada? Dhib malahan – isdhexgalka xabka lacag bixinta ee Bookly oo ay ku jiraan PayPal, Stripe, Authorize.net, Mollie, Payson, PayU Latam, 2checkout, PayUbiz iyo WooCommerce. Astaamaha kale waxaa ka mid ah xulashooyinka nidaamka midabka, jadwalka dabacsanaanta, fasaxyada, tillaabooyinka habka ballansashada, 50+ lacag iyo wax ka badan.
Ma doonaysaa inaad isku daydo Bookly ka hor intaadan iibsan? Hel plugin-ka buug-yaraha ah ee bilaashka ah ee WordPress.org si aad u aragto sida ballan-qaadka ballanku u noqon karo.
11. Jadwalka Booska Ballanta (Bilaash)
Haddii aad leedahay baahiyo ballan ballan oo fudud (laga yaabee baahiyo aan istaahilin inaad lacag bixiso si aad u fuliso) markaas Jadwalka Booska Ballanka ee bilaashka ah wuxuu noqon karaa betka ugu fiican. Waxay bixisaa shaqo ka weyn noocyada badan ee bilaashka ah ee plugins la barbar dhigo. Astaamaha la socda plugin-kan waxaa ka mid ah boosaska waqti la qabsan karo, ogeysiisyada iimaylka, awoodda wax loogu dhoofin karo Google Drive, liisaska buugaagta la daabici karo, habaynta helitaanka iyo tirada jeer ee isticmaaluhu qabsan karo, captchas iyo wax ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho qaar badan oo ka mid ah sifooyinka ugu fiican, waxaad u baahan tahay in aad ka soo baxdo version premium. Tusaale ahaan, haddii aad macaamiishaada lacag ku dalacdo si aad ballan u samaysato, plugin-kani maaha fikradda ugu fiican, maadaama nooca bilaashka ah uu la shaqeeyo PayPal oo keliya. Si aad u isticmaashid kadin kale oo lacag bixin ah, waa inaad fargeeto xoogaa lacag ah.
12. Boos qabsi qaabaysan
Bixinta Templatic ee aduunka ballan-qaadka ayaa wax yar ka duwan inta badan. Kaliya maaha inay soo bandhigto isticmaalaha jadwalka; waxay si toos ah ugu geysaa foomka. Jadwalku wuxuu soo baxaa marka isticmaaluhu uu taabto qaybta taariikhda. Marka, tani waxay la mid tahay nooca habaynta macaamiishaada loo isticmaali doono haddii ay ballansadaan duulimaadyo badan ama qolal hoteel. Aqoontaasi waa xoog.
Sida ballamaha balamaha ugu badan ee WordPress plugins, Templatic Booking WordPress Plugin waxa uu awood u siin doonaa sifooyin boosmis sare leh gudaha mawduucaaga, kaas oo ku fiican kirooyinka. Oo ka dib markaad iibsato plugin, waxay ku daryeeshaa wax walba adiga, iyada oo aan lahayn wax kharash ah bishii ama wax kale. Tani sidoo kale waa mid ka mid ah plugins-yada yar ee u oggolaanaya macaamiishaada inay ku bixiyaan wareejinta bangiga tooska ah. (Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeclaan lahayd inaad ku dhegto kaararka deynta, waxaad mar walba kicin kartaa albaabada kale, sida qalab kasta oo kale.)
Astaamaha kale waxaa ka mid ah foomka boosaska doorsooma, qiimaha xilliyeedka iyo awoodda ay u leeyihiin in ay macaamiisha u soo bandhigaan adeegyo kale oo ay ballansadaan. Iyo qoraal ahaan, plugin-ku wuxuu si weyn ula shaqeeyaa mawduucyo badan oo Templatic's WordPress ah - gaar ahaan Adeegga Biz kaas oo ay ku jiraan plugin.
13. Balamo (Bilaash)
Ballamaha waa mid ka mid ah plugin booking-ka bilaashka ah oo dhammaystiran oo laga heli karo bogagga WordPress. Iyada oo leh liiska astaamaha plugin, ma haysto sabab aan uga doodo sheegashadaas. Hal sifo oo gaar ah: haddii aad leedahay xubno badan oo shaqaale ah oo qabanaya ballamaha, waxaad siin kartaa mid kasta oo iyaga ka mid ah jadwalkooda - oo ay ku lifaaqan yihiin taariikh nololeed iyo sawir - si ay macaamiishu u doortaan midka ay rabaan inay la qabsadaan shaqaalahaaga.
Waxa kale oo ay u shaqeysaa dhanka kale: macmiilku waxa uu ka soo xulan karaa liiska adeegyada ay shirkadu bixiso, iyo haddii mid walba lagu meeleeyo shaqaale kala duwan, markaas si toos ah ayay ula qabsanayaan shaqaalahaas. Ma aha taas oo keliya, waxay ka kooban tahay is-dhexgalka sahlan ee Google Calendars - labadaba adiga iyo macmiilka - iyada oo aan loo baahnayn koodh. Ugu dambayntiina, waxay ku qaadanaysaa saddex jeer oo keliya in macaamilku ballan ballan u qabsado: mid inuu wakhti doorto, mid uu ku sii socdo shaashadda xaqiijinta iyo mid si loo xaqiijiyo. Ku habboonaantaas ayaa laga yaabaa inay si fiican uga muuqato iibkaaga.
Iyada oo leh liis ka badan 30 astaamood oo kale, oo ay ku jiraan sumadaha midabka caadiga ah, buuxinta tooska ah ee macaamiisha soo noqnoqda, isku dhafka Khariidadaha Google iyo awooda lagu soo galo warbaahinta bulshada, waxaan rabaa inaan sheego tani waxay u egtahay balamaha ballan-qaadka ee ugu fiican halkaas. hadda. Qiimahaas lama garaaci karo, sidoo kale.
14. Ballan-qaadista Ballan-qaadka
Boosku waa maamule ballamaha qaddarka leh oo leh astaamo badan iyo ikhtiyaarro si loo dhiso foomka ballansashada ballamaha ganacsigaaga. Aqbal boosaska martida ama u baahan isticmaaleyaasha inay iska diwaan geliyaan akoon, u oggolow isticmaaleyaasha inay maamulaan ballamaha la sugayo iyo kuwa la ansixiyay, ku dara goobo gaar ah iyo boosas waqtiyeed, abuur jadwalyo badan, aqbalaan ballan-qaadyada lacag bixinta iyadoo la adeegsanayo is-dhexgalka WooCommerce ee Booked iyo in ka badan.
Buuggu sidoo kale waa sahlan tahay in la habeeyo. Ka dooro midabka aan xadidnayn ee xulashada, qaabaynta jawaabta, foomka gelitaanka iyo diiwaangelinta, iimaylada la beddeli karo, iwm. Intaa waxaa dheer kombuyuutarrada gaaban ee ku dhex jira ayaa kuu fududeynaya inaad geliso jadwalka iyo foomamka gelitaanka boostada ama bog kasta. Xataa waxa jira “Kudar Google Calendar” oo aad ku dari karto si aad uga caawiso macaamiisha inay xasuusnaadaan ballammadooda.
15. Balamo Fudud (Bilaash)
Qalabka Balamaha Fudud ee Fudud waa taas - fududahay. Waa daw degdeg ah oo fudud oo lagu daro nidaamka ballamaha boggaaga WordPress. Plugin waxa ay taageertaa adeegyo badan, shaqaale, goobo iyo jadwal wakhti dabacsan si aad u abuuri karto jadwal horumarsan ee fursadaha balanta. Markaad dejinayso plugin balamahaaga fudud waxa kale oo jira doorashooyin aad awood ugu yeelatid xayeysiisyada iimaylka ogeysiisyada ballansashada, heerka balanta iyo xaqiijinta / burin.
Markay timaaddo qaabaynta, Balamaha Fudud ayaa sidoo kale fududaynaya! Dooro qaabeynta 1-2 tiir, jiid oo tuur goobaha foomka (oo xitaa samee adiga kuu gaar ah), ku dar qiimayaal ama calaamado, deegaan taariikhda doorta iyo wax ka badan. Waxaa dheer in ay jirto warbixin ku dhisan oo kaa caawinaysa inaad la socoto qaab beddelka iyo xisaabaadka.
16. ballamaha foomamka culeyska culeyska
Ilaa hadda waxaanu daboolnay boosaska ballanta ee kalida taagan, laakiin ka waran haddii aad rabto nidaam foomamka ka xoog badan? Sida Foomamka Cufis-jiidadka? Taasi waa meesha gAppointments ay ka soo galaan. Plugin-gan premium-ka ah wuxuu ku darayaa sifooyinka ballan-qaadka ee foomamka cuf-jiidadka ee caanka ah.
Marka aad isku darto gPpointments iyo Foomamka Cufisjiida, waxaad ku dari doontaa taageerada boos celinta lacagta ah, albaabada lacag bixinta aan xadidnayn, boosas badan oo taariikhi ah, wakhtiyada adeega, adeegyada gaarka ah, ballamaha soo noqnoqda, xidhiidhada kalandarka Google iyo Yahoo, ogeysiisyada iimaylka, si otomaatig ah u xaqiiji/buufi ballamaha iyo qaar kaloo badan. Tan lagu daray habaynta habaynta fudud, ikhtiyaarada tarjumaada iyo maaraynta foom-dhamaadka fudud ee fudud ayaa g Balamaha ka dhigaya doorasho weyn.
17. Jadwalka Balamaha Ultra Pro (Bilaash)
Boosinta Ultra Pro plugin waxay ku siinaysaa astaamo aad u fiican si loo dhiso jadwal ballansan oo aad ku maareyso ballamahaaga boggaga WordPress. Soo-booqdayaasha waxay qabsan karaan ballan iyagoo isticmaalaya habka 4-talaabo ee fudud ee ballan-qaadista si ay waqti u sugaan, markaas plugin-ku wuxuu ku dari doonaa boos qabsiga dashboardka shaqaalahaaga gaarka ah si ay u maareeyaan ballamaha soo socda.
Ma rabtaa astaamo dheeri ah? Booska bilaashka ah ee Booking Ultra Pro waxa uu bixiyaa casriyeyn qiimo leh oo lacag-bixinnada mobilada ah, boos-u-dhigista kooxda, qoraalada gaarka ah, is-dhexgalka kalandarka Google, qiimaynta dabacsanaanta, goobo badan iyo in ka badan
Samee foomka ballamaha adiga oo isticmaalaya WooCommerce! Kaliya ku rakib wax-ku-kordhinta Ballan-qaadka WooCommerce si aad u bilowdo qabsashada boos celinta, iibinta tigidhada, ballan-qabsiga ballamaha iyo wax ka badan. Kaliya ku dar badeecooyinkaaga ama adeegyadaada oo isticmaal plugin si aad u gasho wakhtiyada la ballansan karo ka bacdina sug in macaamiisha ay ballan qabsadaan.
Intaas kuma koobna. Marka lagu daro WooCommerce-kan waxaad yeelan kartaa hal ama dhowr qof oo dhacdooyin la ballansan karo, waxaad bixi kartaa qiimee gaar ah, soo bandhig helitaankeeda iyadoo la eegayo aagga waqtiga, dejiso xaqiijinta boos qabsiga iyo xasuusinta, bixisa baajinta, la jaan qaadida jadwalka Google, iyo in ka badan. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa dheeraadka ah ee WooCommerce-ka rasmiga ah si aad u aqbasho dhigaalka, u oggolow iibiyeyaasha qaybta saddexaad inay qaataan ballamaha, u bixiyaan addons-ku-qabsiga, iwm.
Duubista Ballanta ugu Fiican ee Booqashada WordPress Plugins
Ma jirto wax yaraanta ballan qabsashada WordPress plugins oo kuu oggolaan doona inaad ballan ka qabsato WordPress. Waxaa jira qaar badan, dhab ahaantii, in doorashadu si fudud u noqon karto mid culus. Laakiin waxaan rajaynaynaa, haysashada hage sidan oo kale ah waxay ka hortagi doontaa inay taasi dhacdo. Ma jiraan plugins kale oo ay tahay inaan ogaado? Wax kasta oo aad rabto inaad iiga sheegto kuwa kor ku xusan sida khibradahaaga shakhsi ahaaneed? Hoos ku dhaaf faallo!
Talooyin iyo Aaladaha Muhiimka ah ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada B2B
Sida Loo Xaqiijiyo TikTok: 5 Tallaabo si ay u Dhacdo